वाल अधिकारको कुरा
[2014-06-12 오후 3:17:00]
वाल श्रम विरुद्धको अन्र्तराष्टिय दिवस आज जुन १२ का दिन संसारभर मनाईदै आईएको छ । यसरी वालश्रम दिवसलाई अन्र्तराष्टिय स्तरमा मनाईरहदाा नेपालमा भने यो दिवसको औचित्य कति छ भन्ने प्रश्न उतिकै तेष्र्यिको छ । वालअधिकार र हकको विषयमा हामीले थुपै्र राष्टिय अन्तराष्टिय दिवस मनायौ,उनिहरुको अधिकारमा वकालत गऱ्यौ,सभा भए,सम्मेलन गरिए । तर वालअधिकार र उनिहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै नै छ ।
वालवालीकाले आफुले पाउनुपर्ने अधिकार पाउन सकेका छैनन् । उनिहरु सडकमा छन् । उनिहरु कन्टेनरमा फालिएका फोहोरमा भविष्य खोज्दै छन् । सामाजीक सुरक्षाका सवालमा वालवालिकालाई जोडिन्छ । तर यस खाले सामाजीक सुरक्षाको मुद्दामा सरोकारवालाहरुको प्रयास कतिको सफल छ ,उनिहरुको अभियानले कतिको सार्थकता पाउदै छ,त्यसवारेमा घोतलिएर सोचिरहनु परेन् । वालवालिकालाई निकृष्ट श्रम लगाउन पाईदैन भन्ने भनाईको धज्जी उडिरहेको छ । वालअधिकारका वारेमा चर्का नारा दिनेहरु नै घरमा कलिला वालवच्चाहरुलाई काम लगाएर वालअधिकारका चर्का नारा मञ्चमा उभिएर दिईरहेका हुन्छन् । वालअधिकारका मुद्दालाई अघि सारेर सरकारी र गैह्रसरकारी रकममा मस्ती गरिरहेका कैयन् समाचार सार्वजनिक भएका छन् ।
वाकेमा भएको एउटा घटनालाई नै स्मरण गर्दा आफनै काकाले लगाएको आगोले अनाहकमा मर्न पुगेका कलिला नानीहरुको जीउज्यान वच्न सकेन् । वालअधिकारका वकालत गर्न तम्सिने अधिकारक्रर्मीहरुले तिनको स्वास्थ्यउपचार गर्ने निकाएको दुराअवस्थामा खासै ध्यान दिन सकेको देखिन्न । सिवाए उनिहरुको मृत्यु पछि औला ठडाउनु भन्दा । कान्ति वाल अस्पतालमा रहेको वर्नवार्डमा आईसियु कक्षको अभावमा वालकहरु मर्दै छन् तर अधिकारक्रर्मीहरु त्यस विषयलाई लिएर सम्वन्धीत निकायलाई झक्झकाउन किन सकिरहेका छैनन् । हो, प्रश्न यहिनिर तेष्र्यिको छ ।
वालअधिकारका सस्ता नारा चलाउने अनि वास्तवीक रुपमा वालवच्चाको अधिकारसंग जोडिएको क्षेत्रमा आफनो उपस्थीति जनाउन नस्कने अधिकारक्रर्मीहरु किन र केको लागि वालअधिकारको क्षेत्रमा अघि वढ्दै छन् त्यो वुझन् गाहे रहेन् । वालअधिकारको शिक्षा,स्वास्थ्य र पोषणको वारेमा वकालत गर्नेहरुले देशको लाखौ वालवच्चाको भविष्य संग जोडिएको स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र हविगत कस्तो छ भन्ने कुरामा कहिल्य ध्यान पुराएको देखिएन । सडकमा जिवन विताईरहेका वा उनिहरुको तस्वीर खिचेर दातृनिकायको निगाहामा पैसा झार्न पल्केका अधिकारक्रर्मीहरुले वालअधिकारको पक्षमा आवाज उठाईरहदा घरवाहिर मात्र हैन घरभित्र नै रहेका तमाम वालवच्चाहरुको शिक्षा,स्वास्थय र अन्य आवश्यक पक्षमा सरकारले दिएको सेवासुविधा कस्तो छ भनेर घोत्लीनु आवश्यक छ की छैन् ? प्रश्न अधिकारक्रर्मिहरुलाई ।
सस्तो लोकप्रीयताको लागी सडक वालवालीकाको नाम भजाएर,उनिहरुको अवस्था विकाएर आर्थीक रुपमा सवल वन्ने माध्यमको विकास हुदै गएको देख्न सकिन्छ । अझ शहरमा कस्तो सम्म अवस्था देखिदै छ भने वालअधिकार र हकको कुरा गरेर उनिहरुको लागि भन्दै सस्था दर्ता गराएर पैसा माग्दै हिड्ने प्रवृति पनि देखिदै गएको छ । यस्ता पक्षमा ध्यान दिने ,सरोकार राख्ने र अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद् तथा महिला वालवालीका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको हो वा केहि गर्दैछ ? यस तर्फ निगरानी आवश्यक छ । हुन त वालवालिकाको विषयमा औला उठाईरहदा वालअधिकारको क्षेत्रमा समर्पित भएर लागेका संस्था हुदै नभएका हैनन् ।
तर यहा राम्राभन्दा नराम्रोको नै वढि वोलवाला देखिन्छ । वालवालिकाको नाम भजाएर डलर खेति गर्न पल्केकाहरुको कालो कर्तुत छताछुल्ल भएका छन् । वालवालिकाको दुख ,उनिहरुको अवस्था हाम्रा कतिपय समाजसेवी र अधिकारक्रर्मीहरुको लागि दुहुनो गाई भएका छन् । यर्सथ यस खाले प्रवृतिको अन्तय नभए सम्म यस खाले दिवस मनाईरहनु को सार्थकता नरहने पक्का छ । अन्यथा वालश्रमविरुद्धको अन्र्तराष्ट्रिय दिवस नेपालमा मनाउनु र नमाउनुको कुनै अर्थ रहला र ?